Raila Odinga oo qaliin lagu sameeyay - BBC News Somali
Raila Odinga oo qaliin lagu sameeyay
Raiisul Wasaara Kenya, Raila Odinga, ayaa qaliin looga sameeyay maxkaxda kadib markii uu ka sheegtay madax xannuun iyo daal badan.
Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen qaliinka ayaa ahaa mid fudud, waxaana ay ku tilmaameen xaaladdiisa mid wanaagsan.
Raila Oding, ma lahayn wax astaan ah oo weyn oo muujinayey in uu qabo caafimaad daro, waxaan ka ahayn madax xanuun markii uu gelinkii dambe ee isniinta uu iskiis isaga xaadiriyey isbitaal-ka Nairobi.
Hasa yeeshee baaritaano ay sameeyeen koox dhakhatiir ah oo si khaas ah u daaweynaya Raiisal Wasaaraha ayaa waxa ay ogadeen in maskaxda uu dhaawac ka gaaray loona baahday in lagu sameeyo sida ay sheegeen qaliin fudud.
Image caption Raiisul Wasaare, Raila Odinga waa 65 jir
Raisal wasaaraha waxa sheegay in muddo haatan laga joogo saddex todobaad uu madaxa ku dhuftay albaabka mid ka mid ah baabuurtiisa.
Mr Odinga oo 65 sanno jir ah, waxa lagu tilmaamaa in uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu firfircoon dalka Kenya, waxa uuna hoggaaminayey bilooyinkii la soo dhaafay ololaha ay dowladdu waddo ee ay ku doonayso in lagu ansixiyo dastuurka qabyadda ah ee lagu wado in aftida loo qaado todobaadyadda soo socda.
waxay sheegeen dhakhatiirtu in Raiisal wasaaraha uu isbitaalka ku sugnaan doono shanta maalmood ee soo socota si ay ugu suurtagasho in ay si dhow ula socdaan xaaladdiisa.
Sawirro lagu soo bandhigay wargeysyadda iyo telefishinnada ayaa muujinayey Raila Odinga oo qoslaya isla markaasina u sheekeynaya qaar ka mid ah eheladiisa, asxaabtiisa siyaasadda iyo diblomasiyiinta shisheeyo oo ku booqday isbitaalka.
Wixii ka horeeyey waqtigan ma jirin dhibaato caafimaad oo lagu sheegi jiray ama lala xiriirin jiaray Odinga oo muddo badan ku jiray siyaasadda kana mid ahaa raggii isu sharaxay doorashadii 2007-da ka dhacday Kenya ee natiijadeedii la isu khilaafay.